Anderson က P.C. သတ်(ဥပဒေရုံး Anderson ကသတ်)virtual ကမ္ဘာ့ virtual ငွေကြေး၊ cryptocurrency၊ နိုင်ငံတကာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေါ်တယ် website ｜ GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | ကော်ပိုရေးရှင်း | ကုမ္ပဏီ
Anderson က P.C. သတ်(ဥပဒေရုံး Anderson ကသတ်)
XRP(တိတ်ဆိတ်)ငွေလဲလှယ်မှုက XRP ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သဖြင့် ၂၄ နာရီအတွင်း ၂၄% ကျခဲ့သည်(တိတ်ဆိတ်)စျေးနှုန်းသည်လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်အတွင်း Binance ဖြစ်သည်(Binance)Ripple အားအမေရိကန်လုံခြုံရေးနှင့်ချိန်းကော်မရှင်၏တရားစွဲဆိုမှုအပြီးတွင်ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအရှိဆုံး crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲမှတစ်ခု၏ဈေးနှုန်း ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။、အချို့လဲလှယ်မှုများသည် XRP ရှိပြီးဖြစ်သည်(တိတ်ဆိတ်)Ripple အပေါ်အမေရိကန်လုံခြုံရေးနှင့်ချိန်းကော်မရှင်၏တရားစွဲဆိုမှုသတင်းကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေခဲ့သည်、XRP(တိတ်ဆိတ်)စျေးနှုန်းသည်လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်အတွင်း Binance ဖြစ်သည်(Binance)CoinMarketCap အဆိုအရ ၄၁% အထက်နှင့်ပြိုလဲခဲ့သည်、လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း XRP တိုကင်များ၏တန်ဖိုးသည် ၄၂% ကျော်ကျဆင်းခဲ့သည်、ပြီးခဲ့သည့်ရက် ၃၀ အတွင်း ၄ င်း၏အမြင့်ဆုံးဒေါ်လာ ၀.၇၆ မှ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီးယခုအခါ ၀.၂၅ သာဖြစ်သည်။、အချို့သောအသေးအဖွဲဖလှယ်မှုများသည် XRP ရှိသည်(တိတ်ဆိတ်)ကုန်သွယ်မှုမပြုနိုင်ခြင်းကယခုအချိန်အထိ Forex ကုန်သည်များနှင့် Forex ကုန်သည်များအတွက်သိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်စေသည်、3အသေးစား Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှစ်ခု - OSL(OSL)、Beaxy Exch […]
လီဒိုသည် အီသာကို လောင်းကစားခဲ့သည်။(STETH)$4,193.631.89%